Fihetsiketsehana ho fanokafana indray ny fanadihadiana natao tamin'i Anass Aouragh Martin Vrijland
Home » ankapobeny » Fihetsiketsehana ho fanokafana indray ny fanadihadiana natao tamin'i Anass Aouragh
Posted on Feb 11, 2014 in ankapobeny, Case Anass | 15 hevitra
Tamin'ny Febroary 6, 2014, nisy fihetsiketsehana natao manoloana ny holandey parlemanta ao La Haye. Anass Ireo kivy dia maty tany anaty ala Wassenaar iray taona lasa izay. Nanapa-kevitra ny mpanadihady fa famonoan-tena. Rehefa avy nijery ny fianakaviany nandritra ny autopsy tatitra, dia nahatsikaritra fa nisy foana izany tsipiriany voafaritra tsara. Tsikaritr'izy ireo ihany koa fa ny fikarohana ADN dia natao tamin'ny akanjon'i Anass. Pathologist tsy miankina, izay nianatra ny polisy na ny Anass 'vatana, nanatsoaka hevitra fa ny mandratra Ary dia nanohana ireo tondro mazava fa izy dia niharan'ny faul lalao. Fianakaviana, namana sy mpanohana tonga tao amin'ny Holandey parlemanta mba plie ny Holandey Minisitry ny Fitsarana, Ivo Opstelten, mba napetrany tao anatin'ny fangatahana ofisialy mba hanokatra indray ny raharaha. Tsy mampaninona ny enta-mavesatr'izy ireo, tsy nisy nivoaka. Raha vao nandao ny faritra ireo mpanao fihetsiketsehana, dia nanomboka nisy ny hetsika mahaliana. Jereo ny tatitra ary ampahafantaro anay izay eritreretinareo mikasika ireo hetsika kanadianina.
nataon'i Keven Roberson
All Shares 1
maasdonk / Febroary 11, 2014
Raha ho an'ny "Ramatoa", ny tratsaina fa ny fikarohana tsara dia vita, bunch ny heels fa izany izany !!!
Avereno indray ny NFI mpanao kolikoly izay hanao ny fikarohana.
Miahiahy aho fa lasibatry ny fandrobana na zavatra mitovy amin'izany izy.
Ny teny hoe John van den Heuvel ampiasaina ao amin'ny boulevard RTL dia mampientanentana rehefa vita ity fikarohana ity.
Navoaka tao amin'ny NFI avy hatrany i Anass tamin'ny fotoana 'nodinihina' tamin'ny aloka mahatsiravina!
Asehon'ny saribakoly indray, ny fahasamihafan'ny kilasy manerana ny toerana ary ny fientanentanana amin'ny rehetra dia ny fianakaviana misaona.
Ny fianakavian'ny nenitoa dia mbola ao anaty haizina mikasika ny ho aviny, energetic na tsia.
Aoka ho vita tanteraka amin'ity fako ratsy ity !!
schnijder / Febroary 11, 2014
@maasdonk fandrobana afaka, fa Te tia ny CDA ary ny fanoherana hafa efa manome ny tsara faneva ho ny fifidianana: eh! miara-miasa, fara fahakeliny, tsy be loatra ny asa raha tsy izany ... ..
Miaiky izay efa noraisina. ???? ????
soritra ny CDA dia mazava ho azy D66 (= D666) haha
Fanadihadiana sivily Group Holland / Febroary 15, 2014
Azonao atao ihany koa ny miatrika ny entana miafina amin'ny tranganà famelezana axe.
Tsy misy fakantsary eo amin'ny manodidina azy ve?
tsy nandre na inona na inona.
Ao amin'ny tenany izay efa miahiahy, tena mampiahiahy.
josihida / Febroary 12, 2014
John van den Heuvel? Ny endriny dia manaitra ny tsy finoana. Mpikaroka sandoka. Fa tsara. Ary inona no Els Borst voakasika, izay nanorim-ponenana tamin'ny taona 2000 na 2001 (tsy afaka tsarovy tsara izay taona izany, Hans manokana Van Mierlo nahazo fikarakarana manokana ny olana momba ny atiny dia nahazo laharam-pahamehana ho nataonareo tamin'ny, nieritreritra aho .. eny fa na dia fotolafara aza ny atiny.
Tokoa raha misy hotemetotebel toy ny nono Nisy zava-nitranga dia nofoanana lela rehetra ny ahitra manodidina ny vato tsirairay im-polo ary na inona na inona izy ireo dia afaka mahita fanadihadiana.
Fa Marianne derivative emitters, fa Anass sy Julian sy Rubin (sy ny ray Denis mazava ho azy) na inona na inona raha tsy te-stash zavatra nafenina, dia tsara ny fikarohana dia mafy toy izany aza 100x satria ny karipetra, ary tsy maintsy hijanona mikatona, dia misy kokoa Ny tombontsoa (vakio ny asan-jiolahy), i Els dia afaka miandry ...
Manana herimpo hanohitra ny kolikoly ireo Okrainiana. Jereo ny fomba ifandraisan'ny mpanao fihetsiketsehana amin'ny polisy. Tokony hilaza ny polisy fa nitondran'ny polisy tamina andro maromaro.
Anti deVriesmaffia / Febroary 12, 2014
dia tanteraka amin'ny sehatra. Mazava loatra fa ny jamba ihany no tsy hahita izany.
Izany no mahatonga ny anjara asan'ny RT mazava indray. Ny zava-drehetra dia mamporisika.
RT dia teo amin'ny lisitra mainty nandritra ny fotoana lava.
Tena sahiran-tsaina tahaka ny antsoina hoe 'wakkeren' ho an'ny atidohan'ity Kiev-psy-op.ONGELOOFLIJK ity!
Ny entona mandatsa-dranomaso izay voapoizina dia TSY TSY MISY entona mandatsa-dranomaso. Rano fotsiny na zavatra.
Tsikaritro ihany koa ny fanehoan-kevitra toy izao momba ny klol: "Any Kiev dia fantany ny fomba hanaovana azy"
BS BS feno. Tsy manainga ity hevi-diso ity!
RT dia manohitra fanoherana. Tena mampidi-doza ny mahazo izany.
Tahaka ny mampidi-doza tahaka ny Alex Jones, mpandidy / zionista.
Fa sambatra kosa, ny lalao ao amin'ity horonan-tsary ao Kiev ity dia mazava ho azy fa ny olona rehetra dia afaka mahita azy mora foana.
Tsy mahatsiaro tena isika izao raha ny marina dia midika ho fanamelohana ho faty.
Manapaha hevitra amin'izay tianao.
Tsy hametraka ny kotroka eo amin'ny sehatra. Maro ireo tranonkala / bilaogy no manonona izany. Tsy mahafantatra ny loharano hafa. Raha ny marina, vetivety dia nesorina ho "mpiray tsikombakomba" ianao. Ary ankoatra izany, tsy mbola nomanina ny atidoha aho. Lavitra izany.
izay bilaogy sy tranonkala inona? aloha vao haingana, tsy araka ny antenain'Andriamanitra.
Raha miresaka momba ny fikomiana sy ny kolikoly, jereo ny rohy etsy ambany mikasika ny tena hery ao ambadik'ireo hetsi-panoherana ao Okraina. Ny lahatsary dia ahitana fifanakalozan-dresaka an-tariby eo amin'ny samy mpiara-dia amin'i Obama sy ny Masoivohon'i Etazonia any Okraina.
antso an-tariby an-telefonina, hafatra am-bavany.
Tsy mino an'izany mihitsy aho.
youtube dia hanakana izany.
Ny zavatra tsy tadidintsika ao amin'ny efitrano 2e.
lidy / Febroary 12, 2014
"Nanjary niharan'ny lalao izy."
Ataovy sary an-tsaina izany.